हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध | komalprd हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध – komalprd
Tag Archives: हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध
July 19, 2014 komalprdहास्यव्यङ्ग्य निबन्ध Leaveacomment
आजसम्मको पौराणिक इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने विभिन्न पुराणहरूका बारेमा विभिन्न विद्वान्हरूले प्रकाश पारिसकेको देखिन्छ । तर ‘हाउडी पुराण’ का बारेमा आजसम्म कसैले केही नलेखेको हुनाले लेख्ने काम गरेको हुँ । यो पुराण कहिले लेखियो र यसक लेखक को हुन् भन्ने सम्बन्धमा अझै यकिन हुन सकेको छैन तापनि यो पुराणको किताब ‘बेबिलोनको ह्याङ्गिङ गार्डन भित्र छ’ भनेर मेरा एक जना मित्र भन्नुहुन्छ । कतै म जस्तो ८० के.जी. तौल भएका हेमानका व्यक्तिलाई पनि त्यस पुराणका पाता पल्टाउन हम्मेहम्मे पर्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । मेरो विचारमा यत्रो ‘हाउडी पुराण’ का रचनाकार व्यास नभएर उनका बुढाबाबु नै हुनु पर्छ । त्यसैले यो पुराण अठार पुराणभित्र नपरेर उन्नाइसौं पुराणभित्र पर्छ । पाँडे पुराण, साँढे पुराण, भालुपुराण, भुँडी पुराण, आलु पुराण, पिँडालु पुराण, मायालु र बैंसालु पुराण, संसद् पुराण आदि विभिन्न पुराणहरूमध्ये सबै भन्दा महत्वपूर्ण पुराण ‘हाउडी पुराण’ नै हो । यस पुराणभित्र विभिन्न काण्डहरू छन्, जस्तै धार्मिका काण्ड, आर्थिक काण्ड, राजनीतिक काण्ड, शैक्षिक काण्ड, भौगोलिक काण्ड, साहित्यिक काण्ड आदि । यस पुराणका धार्मिक काण्डभित्र धेरै चाखलाग्दा कुराहरू अध्ययन गर्न सकिन्छ । सगर राजाका साठीहजार छोराहरू एउटै रानीबाट एकै पटक जन्मिएका थिए भनेर ‘हाउडी पुराण’ रचयिताका नाति व्यासले आफैं लेखेका छन् । अब तपाईं एउटा नानी जन्माउन बेथा लाग्दै गरेकी अाफ्नी श्रीमती र साठीहजार नानीहरू जन्माउन तम्तयार भएकी सगर राजाकी श्रीमतीको पेटको तुलना गर्नुहोस् । ‘हाउडी पुराण’ को महत्व आफैं स्पष्ट भइहाल्छ । अनि उनै व्यासले श्रीकृष्णका सोर हजार एकसय आठ ओटी रानी थिए भनेर पनि लेखेका छन् । यस्ता कुरा लेखेको हुनाले पनि यस पुराणलाई भनेजति र सक्तो सहयोग पुगेको छ । यसमा आजका महिलाहरूले ईष्र्या गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । अचेल यत्रतत्र पुराण लाग्दैछन् । एकजना व्यासाचार्यले पुराणकाे साङ्गेका दिन जजमानकी धर्मपत्नी दान थापेर धर्म गरेको कुरा पनि यसै काण्डमा पढ्न पाइन्छ । अब तपार्इँ यस पुराणका आर्थिक काण्डमा उल्लेख भएका विभिन्न कुराहरूको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । हाम्रा देशका एक जना मन्त्री र अर्का एक जना पत्रकारकाे बहस पनि यसै काण्डभित्र पर्छ । पत्रकारकाे अन्तर्वार्तामा हाम्रा देशका मन्त्रीजी भन्छन्- ‘विगत दिनको तुलनामा हाम्रो देश धेरै धनी भएको छ, देशको आम्दानीले देशलाई ओढ्नु ओछ्याउनु भइको छ ।’ यो सुनेर पत्रकार भन्छन् – ‘कति होला त हाम्रो देशको वार्षिक आमदानी मन्त्रीजी ?’ गौरवपूर्ण स्वरमा मन्त्रीजी उत्तर दिन्छन् – ‘चार खरब !’ आश्चर्य मान्दै पत्रकार भन्छन् – ‘बाह…यो जम्मै आफ्नै देशको आमदानी……?’ पत्रकारको यो उच्छ्वासमय वचन सुनेर मन्त्रीजी भन्छन् – ‘यसमा त्यस्तै गाेड जति मात्र वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त भएको छ । यस बाहेक अरू जम्मै आफ्नै देशको आमदानी हो ।’ यी कुराहरू सुनेर मलाई पनि यो काण्ड धेरै राम्रो लागेको छ । यो ‘हाउडी पुराणान्तर्गत’ आर्थिक काण्डमा वर्णन गरिएको मन्त्री माननीय सम्वाद पढ्नाले यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा पनि मुक्ति मिल्नेछ । आर्थिक काण्डपछि राजनीतिक काण्ड शुरु हुन्छ । यो पनि आर्थिक काण्ड भन्दा कम महत्वपूर्ण छैन । राजनीतिक काण्डभित्र गलैंचा काण्ड, गाई काण्ड, झोडा काण्ड आदि अनेक विशेष काण्ड पनि छन् । यो काण्डमा आफ्ना आफ्नै इष्ट देवताहरू छन् । यिनीहरूको नाम यहाँ उल्लेख गर्नु भन्दा सम्झेर जान्नु नै वेश हुन्छ । विशेष गरेर ‘हाउडी पुराण’ को राजनीतिक काण्ड वाचन गर्ने पण्डित सारै सिपालु हुनुपर्छ । हात्तीलाई भुसुना र भुसुनालाई हात्ती बनाउन सक्ने वाचकी उपवाचकीको मात्र आवश्यकता पर्छ यहाँ । झापामा पनि यस पुराणका वाचकीहरू प्रशस्त छन् । यहाँका झन्डै भू.पू. माननीय र निर्वाचित माननीयजीहरूले जताततै बिजुली निकालिदिएर झिलिमिली बनाइदिएका छन् । घरघरै पैनी, वर्षामा हिले पुल र चैत वैशाखमा धुले पुलको सारै राम्रो प्रबन्ध मिलाइदिएको छ । झापाका एकजना वरिष्ठ ००२१% माननीयजीले माइकबाट गाउँपिच्छे भन्नु भएको थियो, “सबै क्षेत्रमा मेरो भोट सोलिड छ, मलाई नै भोट दिनुहोला ।” होला तानि भनेर आफूले पनि चिल्लै भोट उहाँलाई नै दिइयो । उहाँले भनेको सोलिड ठीकै रहेछ, किनभने लगभग १ लाख खसेकोमा उहाँको बाकसमा झन्डै दुईसय दस जति भोट खसेको रहेछ । अर्का एकजना अझ वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ताको बारेमा पनि यसै काण्डको गफडी अध्यायमा पढ्न पाइन्छ । उहाँलाई ‘कति वर्षको हुनुभो हजूर ?’ भनेर प्रश्न गर्दा यही २०३९ सालको क्षयमासमा साठी लागेको कुरा बताउनुहुन्छ । “नेपालमा राजनीति गर्न लागेको कति भयो र केके गर्नुभयो ?” भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ—‘मैले २०१९ सालदेखि पञ्चायतमा हात हालेको हुँ । त्यसपछि ७ वर्ष प्रधानपञ्च, साढे नौ वर्ष जिल्लापञ्चायतको सदस्य, १३ वर्ष जति सभापति र १५ वर्ष जति माननीय भएर अन्त्यमा स्व. महेन्द्रको पालामा ६ वर्षसम्म भारतको राजदूत पनि चलाएँ ।’’ “हजूर संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनेको थिएँ मैले त….।” भन्ने कुराको उत्तरको रूपमा उहाँ भन्नुहुन्छ,—“अँ……१२ वर्षजति त्यो काम पनि गरेर अनुभव बटुलें, अनि त्यो काम कान्छाबालाई गर्दै गर है भनेर छाड्न बाध्य भएँ । किन बाध्य भएँ भनौला, त्यहाँ बस्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिब खाइदेउ कि खाइदेउ, भनेर दिक्क लाए । अब आफूलाई इन्टेस नभएको कुरो के खाइरनु, अब बूढो पनि भइयो भनेर छाडेको । त्यो पद आजीवन हजूरकै लागि भयो, हजूरले बसिदिनै पर्छ भनेर ओहो……. कति हैरानी पारेका भने……..!” हाउडी पुराणको अर्काे काण्डको नाम भौगोलिक काण्ड हो । यस काण्डमा धेरै चाखलाग्दा कुराहरू पर्छन् । यस काण्डको अन्तरराष्ट्रिय होइन राष्ट्रिय पण्डितमा मेरो नाम लिँदा तपाईंहरूलाई पाप लाग्दैन बरु धर्मै हुन्छ । किनेभने मैले जापान, बेलायत, रुस, अमेरिका, अष्ट्रिया, अफ्रिका, कोरिया आदि धेरै देश विदेश घुमेको छु । जोन केनेडीसँग एक वर्षसम्म सँगै बाख्रा चराइयो भने राष्ट्रपनि ब्रेजनेभ र मैले एउटै गुरुबाट रुद्री पढेका हौं । भारतको त कुरै छाडौ…..। भारतका बारेमा ता के कुरा गर्ने ? भारतका पूर्वप्रधानमनत्री जवाहारलालकी छोरी इन्दिरा गान्धी कसकी मितिनी हुन्, थाहा छ तपाईंहरूलाई ? तपाईंहरू भन्नुहोला यसलाई त संसारकै जोग्राफीको ज्ञान रहेछ…….। भन्नु उसो होइन, यो कुरामा अलिक गडबड भएको छ, किनभने कुनै देशमा पनि म एक वर्ष भन्दा कम बसेको रेकर्ड छैन, तर आफ्नो अभाग नै भनौं जोग्राफीमा भने नौ महिना भन्दा बढी बस्ने मौकै परेन । त्यसकारण त्यस देशका बारेमा भने मलाई कमै मात्र थाहा छ ।” उप¥युक्त काण्डहरूबाहेक हाम्रो देशमा शैक्षिक काण्डको त्यत्तिकै महत्व छ । यसबाट हाम्रो शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधिको राम्रोसँग अध्ययन गर्न सकिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि अथदेखि इतिसम्मका व्यक्तिहरू कटिबद्ध भएका छन् । एक कक्षामा १०० देखि १५० सम्म विद्यार्थी राखेर तिनलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिएर गुणस्तर बढाउन हामी शिक्षकहरू सफल भएका छौं भने विद्यार्थीहरूको संख्याका अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको समुचित व्यवस्था नमिलाइदिएर सम्बन्धित निकाय अझै गौरवान्वित भएको छ । छातीमा हात राखेर नढाँटी भन्ने हो भने हामी कतिपय शिक्षक भनाउँदाहरू पनि हाउडीको भरमा ठगबहादुरको वारेस लिई पैसो पचाउने मेलो गर्छाैं । भन्नु हुँदैन, नाक रहँदैन भने जस्तै कतै कतै कक्षामै राउन्नेका भाइको पाठ खेलिरहेका हुन्छौं । शिक्षक मात्र होइन विद्यार्थीहरू त झन् के छन्, छन् ! कुनकुन अनिवार्य विषय हुन् र कुनकुन इच्छाधीन विषयहरू हुन् भनेर करीब करीब उनीहरू सबैलाई थाहा भइसकेको हुन्छ । खालि कसैले भन्न मात्र नसकेको हो, तिनका विषयमा अभिभावकहरू केही भनुन् त आफ्नै छोराछोरी परे, अनि शिक्षकहरू केही भनुन् त आफ्नै विद्यार्थी परे । आकाशतिर फर्केर थुक्ता आफ्नै मुखमा ता पर्छ नि ! होइन र……..अब आयो इच्छाधीन विषयको कुरा । यी विषयहरूमा हिजोआज प्रायः धेरैजसो विद्यार्थीहरूले राजनीति, गुन्डावृत्ति र लफङ्गेनीति विषयहरू लिएका हुन्छन्, किनभने यी विषयहरू पढ्न त्यति कठिन पर्दैन र उनीहरूको नाम ‘हाउडी पुराण’को पानामा सदासदाका लागि लेखिन्छ । हुनत भनाइ र गराइमा धेरै अन्तर भएको कारण भन्न भन्दा गर्न बहुत मुस्किल छ । विचरा विद्यार्थीहरूले पनि कतितिर भ्याउन् । बिहान घरबाट एक अँगालो किताब बोकेर नहिंडी हँुदै हुुँदैन । विद्यामन्दिर मात्र होइन चलचित्र मन्दिर पनि भ्याउनै प¥यो । यसो भएपछि बिचराहरूले परीक्षामा ‘हाउडी’ उत्तर नदिए के दिउन् त बरा….! हाउडी पुराणको साहित्यिक काण्डको पनि हिजोआज अलेलि नाम चल्न थालेको छ । नेपाली साहित्यका कविहरू जतासुकै छ्यास्छ्यास्ती छन् । यस काण्डका एकजना आशु कवि लेख्छन्— नाम्लो बिना भारी बोक्न सकिंदैन, दाँत बिना हड्डी टोक्न सकिंदैन, अनि रक्सी बिना नाच्न सकिँदैन, झन् कान्छी बिना बाँच्न सकिंदैन । त्यस्तै अर्का एक जना कविले–
विहङ्गम विकराल भीमकायरूपी क्षितिजको व्योमशीलाको सुशीलाले आधारशीलाको एउटा हिमाङ्कित कृष्णशीलामा निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्थाले असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा आँच आउन नदिने दिनानुदिन साइँली र मेरो प्रेम बढाएको छ । आदि लेखेर ‘युगकवि’ को दर्जा पाएका छन् । ‘अपि मासं मसं कुर्यात्, छन्दोभङ्गं नकारयेत्’ जस्ता सिद्धान्त मान्ने अर्का एकथरी कवि देख्दा हामी तीनछक्क पर्छौं । ‘कान्छीको भुँडी क्या राम्रो, जेठीको तिघ्रा झन् राम्रो’ जस्ता गीत गाएर लोकप्रिय सफल गायक भएका व्यक्तिहरू तपाईं हाम्रै सामुन्ने छन् । यसरी ‘हाउडी पुराण’ ले धेरैजसो क्षेत्र ओगटेको छ तापनि यसको महात्म्य भने त्यति लामो छैन । महात्म्यमा उल्लेख भएअनुसार यो पुराण छोटो अनि मोटो छ, यसको महिमा अपार एवम् असार छ, जुन व्यक्तिले यो पुराण एक पटकसम्म पनि पढ्ने वा सुन्ने काम गरेको छैन त्यसको जिन्दगी बेकार छ, पढेर पनि एक खित्का नछाड्नेले अर्काे जन्ममा आफंैलाई धिक्कार्छ । उप¥युक्त महिमाका अतिरिक्त यस पुराणका मुख्य तीन विशेषताहरू छन् भन्ने कुरा रामेको बाबु च्यामेलाई पनि थाहा छ । यो पुराण जसले मन लगाएर पढ्छ, त्यसको नाक, जसले ध्यान दिएर सुन्छ, त्यसको आँखा र जसले एक टक लगाएर हेर्छ त्यको कान सोझै स्वर्ग जान्छन् यसमा कुनै सन्देह छैन । हाउडी पुराण (२०५२)
नमस्कारका केही उत्तरआधुनिक अर्थहरु
नेताले गरेको नमस्कारको वास्तविक अर्थ मतदातालाई त्यतिबेर थाहा नभए पनि माथि गएर मन्त्री भइसकेपछि थाहा हुन्छ । उनीहरु आफ्ना टाउकामा हात राखेर नेताले गरेको नमस्कारको यस किसिमको वर्णपरक भित्री अर्थ थाहा पाउँछन् –
नेताले गरेको नमस्कारमा वर्णाक्षरात्मक अर्थ मात्र नलागेर शब्दवाक्यात्मक अर्थ पनि लाग्न सक्छ विद्यार्थी र अभिभावकले गरेको नमस्कारमा जस्तै । कुनैकुनै नेता वा मन्त्रीले मात्र अभर पर्दा नमस्कार फर्काउँछन्; तर सो नमस्कारको उच्चारण उर्ध्व अनुत्तानमा गरिएको हुन्छ । यस किसिमबाट गरिएको नमस्कार्र्ꜛको ध्वन्यार्थ हुन्छ – हामीले भोट दिएर जिताएका थियौं, अब हाम्रो क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्यो भनेर सहयोग माग्न आएका हौ भने जुन बाटो आएका थियौ खुरुक्क त्यही बाटो लाग । नत्र मेरो बडी गार्डले मुन्ट्याएर चारभन्ज्याङ कटाइदिन्छ, थाहा छ ? अब त सहयोगको कुरा सिब ! आफूलाई त पुग्या छैन ! ! !
मच्छड संस्कृति : झुलभित्र र बाहिर